Izindaba - Ukuphumelela "kwePlastiki": ukuthuthukiswa kwamapulasitiki abolayo kubalulekile
Ukuphumelela “kokuvinjelwa kwepulasitiki”: ukuthuthukiswa kwamapulasitiki abolayo kuyisisekelo
Ngomhla zingama-31 kuZibandlela wezi-2018, uMnyango Wezemvelo ukuqinisekisile ukuthi izitolo ezinkulu zezwe zizovala ukusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki ezisetshenziswa kanyekanye kusukela ngo-2019 ukuze kuqhutshekwe nokunciphisa “ukungcoliswa okumhlophe.”
IPhalamende LaseYurophu liphinde lagunyaza lokho elikubiza ngokuthi “ukuvinjelwa okukhulu kwepulasitiki emlandweni,” ukuvimba yonke imikhiqizo yepulasitiki esetshenziswa kanye engenziwa ngezinye izinto ezifana namakhadibhodi kusukela ngo-2021 kulo lonke elase-European Union.
Ekupheleni kuka-2007, iHhovisi Jikelele loMkhandlu Wombuso lakhipha umthetho wokuvinjelwa kokukhiqizwa, ukuthengiswa kanye nokusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki ezincanyana kakhulu ezingaphansi kuka-0.025 mm ubukhulu kusukela ngoJuni 1, 2008, futhi ukusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki kuzokhokhwa. okwe.
Ngeshwa, eminyakeni eyi-10 ngemuva kokuvinjelwa, umqondo wokukhokha nge izikhwama zepulasitiki seluqalisiwe ezinxanxatheleni zezitolo ezinkulu, kodwa ukungcoliswa kwabamhlophe akunciphisi kangako. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuthenga izikhwama zepulasitiki sekuwumthombo oqinile wemali engenayo ezitolo ezinkulu.
Ezimakethe zenyama, izitolo ezinkulu ezincane neziphakathi nendawo, izitolo zasemgwaqweni, izitolo zasemgwaqweni kanye nezinye izindawo “ezifile”, izikhwama zepulasitiki ezincanyana kakhulu zisasetshenziswa “zero izindleko”, sekuphenduke ukusatshalaliswa okujwayelekile kwezimpahla ezithengiswayo.
Nokho, kule minyaka eyi-10 edlule, kube nezinguquko ezinkulu emnothweni nasemphakathini. Ukulethwa kokudla kanye nokulethwa okusheshayo sekuphenduke umthengi omkhulu wezikhwama zepulasitiki. Imboni yokulethwa kwezidingo eChina idle cishe izikhwama zepulasitiki eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-14.7 ukusuka ku-8.268 billion ngo-2008 kuya ku-2016, ngokusho kombiko we-State Post Bureau. Idatha yomphakathi iphinde yakhombisa ukuthi ama-oda alinganiselwa ezigidini ezingama-20 afakwa ezinkundleni ezintathu ezinkulu zokulethwa kokudla kwaseChina nsuku zonke, nge-oda elilodwa kusetshenziswa okungenani isikhwama sepulasitiki esisodwa.
U-Chen Zhongyun, uprofesa ohlanganyele e-China University of Political Science and Law, uthe uchungechunge oluphelele lwezemvelo kusukela ekukhiqizeni, ekuthengisweni nasekusetshenzisweni kabusha kwe izikhwama zepulasitiki kufanele zisungulwe ezingeni lenqubomgomo kanye nezinga lokuphoqelela, futhi izindlela ezihlukene zemakethe kufanele zisetshenziswe ukulawula ukungcoliswa kwabamhlophe ngesisekelo sokunciphisa izindleko zomphakathi.
“Akunangqondo ukukhawulela nokwenqabela ukusetshenziswa komkhiqizo ngobumpumputhe. Kuzoba nomphumela othile, kodwa umphumela ngeke ubonakale.” Ngokuka-Che Zhenming, uprofesa eSikoleni Sokudla Ne-Bioengineering e-Xihua University, ikhambi elibaluleke kakhulu ukuthuthukisa amapulasitiki angaboli.